UNodoli Wothando Uyathengiswa  ISilicone exabiso liphantsi kunye noNodoli bangempela be-TPE
Olwam Unodoli Othandekayo Oyinyani Othandwa Ngubomi Kwamadoda Nabafazi
Ngaba uyafuna ukuthenga ngexabiso eliphantsi oonodoli bothando? Siya kuqinisekisa ulonwabo lomntu wonke. Nkosazana thanda unodoli yenziwe nge-silica gel okanye i-TPE (i-thermoplastic elastomer). Ezi zinto zimbini azinabungozi ngokupheleleyo kwimpilo. I-Blonde, i-brunette okanye i-brunette - kwiivenkile zethu, uya kufumana lonke uthando lokwenene olunokucinga unodoli wesondo ehambelana nayo yonke incasa kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Unganxiba eyakho tpe uthando unodoli kwimpahla yangaphantsi oyikhethileyo ngencasa okanye nasiphi na isimbo sefashoni oyifunayo. Thatha ixesha lokujonga kwiimodeli zethu ezahlukeneyo kwaye uziqinisekise ngomsebenzi owahlukileyo we tpe isondo unodoli okanye ukhetho oluneenkalo ezininzi zikanodoli. Njengomfazi wokwenene, kukho iindlela ezininzi zokudlula unodoli wangempela. Ngomlomo wakhe, izandla kunye namabele, iVagnia yakhe kwaye kuxhomekeke kwivumba le-anus, zonke iinkohliso zinokuba yinyani. Ukuba awubafumani oonodoli bothando abalungileyo obakhangelayo. Okanye ukuba ufuna ukwenza unodoli wakho wefantasy, nceda usazise. Buza imibuzo yakho okanye iingcebiso kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.
Thenga i-Doll yothando ngoBomi boBuntu oBugqibeleleyo obuDala boMzimba waseJapan
Yiza uthenge isiphelo esiphezulu esinexabiso eliphantsi le-tpe love doll
Wamkelekile ukuthenga real thanda unodoli, oonodoli bothando abangabizi kakhulu esibathengisayo banomdla wokwenyani ngokwesondo kunye namava ngokwesondo! Abathengi abadala abathe bathenga bathi baneliseke kakhulu kwaye bazele ukulambela unodoli wothando oluncinci. Le mvakalelo isuka ikakhulu kwisikhumba sayo esikumgangatho ophezulu kunye nobufazi obuyinyani. Zonke iinkalo ziyafana nabantu bokwenyani, kubandakanywa nenkqubo yokwenza uthando ngesondo soonodoli bothando!
yethu idoli yesini eyindoda ukunceda ukuphucula izakhono zakho zesini kunye nezikhundla ezahlukeneyo zesini, uthenge unodoli wethu wothando olune-inflatable kwi-intanethi, unokuyonwabela inkonzo yethu yokuthumela simahla kunye nokuhanjiswa okuyimfihlo. Emva koko Unodoli wesini waseJapan ifika, ungakonwabela ulutsha oluthanda unodoli amabele athambileyo, iimpundu ezinkulu kunye nelungu lobufazi eliyinyani ubusuku bonke, kwaye unokufumana isondo somlomo, isondo sangemuva, kunye namabele. Apha, unokufumana ngokupheleleyo ulonwabo lwesondo oluziswa ngudoli we-robot kuwe. Anodoli yesini vumela amahomoni akho aphume ngokupheleleyo.
I-Urdolls ithengisa umgangatho ophezulu kunye Ubukhulu obuphantsi ubomi bothando unodoli, ukwenza injongo yevenkile yethu, umxholo ongunaphakade. I-TPE kunye nonodoli wothando we-silicone zenziwe ngezinto ezahlukeneyo zodidi oluphezulu, ezizezona ziphezulu kwihlabathi ezinodoli omncinci wothando. Sinoluhlu olubanzi lweenodoli zothando ezigqibeleleyo onokuthi ukhethe kuzo. Ukwenza iodolo yokuthenga unodoli wethu othandwayo wesifuba sothando lolona khetho lwakho lulungileyo.
Iividiyo eziluncedo ngakumbi malunga thanda iphonografi:
Ukuze ukwazise ngakumbi malunga noonodoli bothando, sikulungiselele ividiyo, ividiyo nantsi umfanekiso wefektri yoonodoli bothando, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nobomi obufana noonodoli bothando, nceda ubeke ingqalelo kwiphepha lethu elitsha lemveliso. kunye nomzobo wethu ophezulu wentengiso, oonodoli uthando cheap ikufanele.